ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာယီ ၃၅ - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Khun Sai / UK / ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာယီ ၃၅
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာယီ ၃၅
(မိုးမခ)ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၂၀
အခု ဥရောပမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းလိုလို လချီကြာမြင့်လာတဲ့ သူတို့တိုင်းပြည်တွေက ပိတ်ဆို့ ထိန်းချုပ်ထားတာတွေအားလုံးကို ပြန်ဖြေလျော့ချင်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စနစ်တကျ- ဘယ်ပုံဘယ်နည်း အကောင်းဆုံးနဲ့ တဖြေးဖြေး ဖြေလျော့သွားရမလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စ မှာ အတော် စမ်းတဝါးဝါး- အတော် သတိကြီးကြီးထား- ကိုင်တွယ်နေကြရပါတယ်။ ပိတ်ဆို့ထားလို့ တဖက်မှာ လူတွေငတ်- တိုင်းပြည်စီးပွါးရေးတွေလည်း ထိခိုက်နေရ တယ်- တခြား ပြန်ဖွင့်ရမယ့် တဖက်မှာတော့ နောက်ထပ် ဒုတိယကိုဗစ်လှိုင်းရိုက်လို့ အကြီးအကျယ် ထပ်မံ ကူးစက်ပျံ့နှံ့ လူတွေသေဆုံးကြရမယ့်ကိစ္စ ။ကာကွယ်ဆေးပေါ်တဲ့ အထိလဲ ဘယ်သူမှ မစောင့်နိုင် ( တွင်းထဲမှာ ကြာကြာပိတ်မိနေလို့ အစာငတ်နေတာက -တဖက် ။ နောက် တဖက်က -ပဒတ်လိုက်ခွေး ရဲ့ အမြီး ပုတ်သံ- ပဒတ်ကျင်းတူးနေတဲ့ လူရဲ့ အသံ ကို တကြောင့်ကျကျ နားစွင့် နေရတဲ့ ပဒတ် လို ဘဝ )
ဂျာမဏီ မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က စ - ကျောင်းတွေ တချို့ပြန်ဖွင့်။ ဆိုင်အငယ်လေးတွေနဲ့ စာအုပ်ဆိုင်တွေ -ကားနဲ့ စက်ဘီး အရောင်းဆိုင်တွေ ပြန်ဖွင့်တယ်။ လူ ၂၀ ထက်ပိုတဲ့ အစုအဝေးတော့ ခွင့်မပြုပါဘူး။ အဲဒီလို လော့ဒေါင်း ဖြေလိုက်ပြီးတဲ့ နောက် ကူးစက်လူနာ တွေ့တဲ့နှုန်း ပြန်တက်လာတယ်လို့ တရားဝင်စာရင်းတွေအရ သိရပါတယ်။ ဂျာမဏီ အကြီးအကဲ အင်ဂျလာမာကဲလ် က သူတို့အားလုံး အင်မတန်ပါးလှပ် တဲ့ ရေခဲလွှာပေါ် ရပ်နေတာနဲ့ တူကြတယ်။ သူတို့ အချိန်မရွေး ကျွံကျသွားနိုင်တယ်။ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ကိုဗစ် ကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ သတိပေးပါတယ်။
ဂျာမဏီအတွေ့အကြုံ က အဲဒီလို ဆိုပေမယ့် အီတလီ စပိန် ပြင်သစ်တို့မှာ လဲ ဖြေလျော့တာတွေကို စတင်နေကြပါပြီ။
ပြင်သစ် Lock Down ဖြေဘို့ကိစ္စ - ဘယ်လိုဖြေလျော့မယ်ဆိုတာကို ပါလီမန်မှာ စဆွေးနွေးကြတယ်။ ပြင်သစ်တွေရဲ့ နေနည်းထိုင်နည်း ကို ကိုဗစ်က မကြိုက်ဘူးလို့ သမတမိုက်ခရွန်က ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ တွေ့တဲ့ အစည်းအဝေးမှာသတိပေး တယ်။ လာမယ့် မေလ ၁၁ ရက် ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်မယ်။ ကော်ဖီဆိုင်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေကိုတော့ ပိတ်ထားဦးမယ်လို့ ပြောတယ်။ သိပ္ပံကောင်စီ ကတော့ ကျောင်းတွေကို ဆောင်းဦးရာသီလောက်ရောက်မှ ဖွင့်စေချင်ခဲ့တယ်။
လူ ၂သောင်း ၃ထောင် သေဆုံးထားတဲ့ စပိန်မှာ နေ့စဥ် သေဆုံးတဲ့ လူနာ နှုန်း ၃၀၀ အောက် ကျသွားတဲ့ အခြေအနေရှိလာတယ်။ ၁၄ နှစ် အောက် ကလေးတွေကို အိမ်အပြင်ထွက်ကစားခွင့် စပေးတယ်။
လူ ၂သောင်း ၆ထောင် ကျော် ဆုံးရတဲ့ ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယ အထိ အနာဆုံး အီတလီ ကတော့ မေလ ၄ရက်နေ့မှာ စက်ရုံတွေ- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေ စတင်လည်ပတ်ခိုင်းလိုက် ပြီး ပိတ်ဆို့ထားမှုကို ဖြေလျော့ပါတယ်။
နယ်သာလန် မှာလဲ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တယ်။ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေလဲ ပြန်လည်ပတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ အသုဘတွေကို ကျင်းပခွင့်ပေးပြီဖြစ်ပေမယ့် လူအများ စုရုံးခွင့်မျိုး တော့ မပေးသေးပါဘူး။
လော့ဒေါင်း ၅ပတ် ရောက်လာတဲ့ သြစတေးလျမှာလဲ ဖြေလျော့မှုတွေ စတင်နေပြီး ဘန်ဓီ ပင်လယ် ကမ်းခြေမှာ ရေလွှာလျောစီးသူတွေ ပြန်စည်ကားလာပါတယ်။
နယူးဇီလန် က လဲ ဖြေလိုက်ပါပြီ ။
ယူကေကတော့ ပိတ်ထားတာကို ဖြေလျော့ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားမရှိသေးဘူး လို့ . ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် ပြန်ကျန်းမာလာတဲ့ မနေ့က အလုပ်ပြန်ဝင်ဝင်ချင်း မှာ တိုင်းပြည်ကို ပြောပါတယ်။ . ခု တိုင်းပြည်အနေအထားက ဖြေလို့ မရသေးတဲ့ အကြောင်း ၊ တိုင်းသူပြည်သားများ စိတ်ရှည်ပေးကြဘို့. ။ နောက်တကြိမ် မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်ကူးစက် အသက်ဆုံးရှုံးကြရမယ့် အဖြစ်မျိုး ကို ထပ် အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပါ တယ် ။ သေဆုံးဦးရေ ၂၀၀၀၀ ကျော်ခဲ့ ပြီးပြီ ။ အရင် ၂ပတ်လောက်တုန်း က တရက်သေ နှုန်း လူ တထောင်နား အထိ ရောက် နေခဲ့ ရာက အခု တဖြေးဖြေး ပြန်ကျလာနေတဲ့ အပိုင်းကို ရောက်လာတယ်။ ( ယနေ့ သေဆုံးလူနာ ၅၈၆ ) ဒါပေမယ့် ခုထိ သေနှုန်း ၃၀၀ အောက်တော့ မရောက်သေး။ခုလို သေနှုန်းကျဆင်း လာတာဟာ လော့ဒေါင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလို့ ပြောပါတယ်။ ကိုဗစ်ရှိမရှိ လူတွေကို စစ်ပေးနိုင် တဲ့ နှုန်းလဲ တရက် တသိန်း အထိ စစ် ပေးနိုင်ပြီ ။ ဒါက ဂျာမဏီနည်း။
ဂျာမဏီမှာ စဖြစ်ကတည်းက လူ အများဆုံးစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပြီး ရောဂါ ရှိတဲ့သူနဲ့ မရှိတဲ့သူ တွေကို ခွဲထုတ်တာ၊ ရောဂါ သည်နောက်ကို ခြေရာခံတာ ( Testing , Tracing , Tracking ) အဲဒီလို လိုအပ်တာတွေအားလုံး လုပ်နိုင်ခဲ့ တော့ လူ သေနှုန်းမှာ ယူကေထက် ၃ဆကျော် ၄ဆလောက် နဲတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယူကေမှာ အခု အသည်းအသန် ကိုဗစ် ခြေရာခံ စစ်ဆေးတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်တယ်။ ကိုဗစ် စစ်ဆေးတဲ့ စင်တာတွေကို မသွားနိုင်တဲ့ သူတွေ- ကားမရှိတဲ့ သူတွေအတွက် အိမ်တိုင်ယာရောက် နှာရည် နမူနာ ( Nasal Swab ) လိုက် ယူတာမျိုး လုပ်ပေးတယ်။ ပထမ ဦးစားပေးမှာ ဆေးရုံ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ ။ ဆရာဝန် နပ်စ် ဆေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကို စစ်တယ် ။ နောက်ပိုင်း ရဲ မီးသတ် ကျောင်းဆရာ လူအိုရုံ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တွေ အထိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စစ်တယ်။ ကိုဗစ် က အင်မတန် အဆင်မြင့်ဗိုင်းယပ်စ် ဖြစ်လေတော့ သူဟာ ရှိမှန်း မရှိမှန်း မသိအောင် ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ပြီး - ကူးစက်စေတဲ့ နည်းကို တတ်တယ်။ သူရှိပြီး ဘာရောဂါလက္ခဏာမှ မပြပဲ နေတဲ့ အဆင့် ( asymptomatic) ။ ရောဂါရှိပြီး လက္ခဏာ မထင်ရှား-မပေါ်သေးတဲ့ အဆင့် ( pre-symptomatic ) ။ အဲလို နေနည်းအမျိုးမျိုး နဲ့မာယာဖွဲ့ တတ်သလို ခင်ဗျား ကိုယ်ထဲ- ကိုဗစ် ပဋိပစ္စည်းတွေ ( Antibodies ) ရှိနေတာကို စစ်လို့တွေ့ရင်လဲ ခင်ဗျား ဟာ ကိုဗစ် ကို နိုင်နင်းနေပြီလို့ အဓိပ္ပါယ် မသက်ရောက် သေးဘူး။ ထပ်မဖြစ်ဘူးလို့ မပြောနိုင်သေးဘူး တဲ့ ။ဗိုင်းယပ်စ်များများထပ်ဝင်ရင် ၊ဒါမှ မဟုတ် တခြားမျိုးစိတ်ဝင်ရင် ထပ်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ ကိုဗစ်ရဲ့ အတွင်းသဘောနဲ့ မာယာတွေကို ခုမှ တဖြေးဖြေး လူတွေ လေ့လာနေကြရဆဲ ။
အမေရိကန်မှာတော့ ကူးစက်တာတွေ ပြင်းထန်နေသေးတုန်း မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင် ဖြစ်နေတုန်းမှာပဲ ပိတ်ဆို့တာကို ဖြေလျော့ချင်သူတွေနဲ့ ဆက်ပိတ်ထားချင်သူတွေတိုက်ပွဲက ပြင်းထန်နေပါတယ်။ သမတ ကြီးထရမ့်က ဆေးသိပ္ပံ ဆရာတွေ အကြံပေးတာကို တသွေမတိမ်း လိုက်မလုပ်ချင်ဘူး။ ကိုဗစ်ကို လျော့တွက်ခဲ့တာတွေလဲ ရှိတယ်။ လူတွေသေနေတဲ့ ကိစ္စကို ကျော်ပြီး စီးပွါးရေး အရမ်းဆိုးမသွားအောင် ထိန်းသိမ်းထားတာက တိုင်းပြည်အတွက် ပိုကောင်းမယ်ထင်တဲ့ သဘော သူ့ပြောဆိုချက်တွေမှာ တချက်တချက် တွေ့ရတယ်။ ဖြေလျော့ချင်သူတွေအပိုင်း က သေတာ အရေးမကြီးဘူး၊ မငတ်ဘို့ ပို အရေးကြီးတယ် လို့ အော်ဟစ် နေကြပြီး ဆက်ပိတ်ဆို့ထားချင်သူတွေကတော့ သေတာထက် ဆိုးတာ ဘာမှ မရှိဘူး။ မသေအောင် ဆက်ပိတ်ဆို့ထားရမယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
အခု ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူအသေဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ နယူးယောက်မြို့ပေါ်က ဆေးရုံတရုံဖြစ်တဲ့ -ပရက်စ်ဘတေးရီးယန်း ဆေးရုံ အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ လော်နာဘရင်း Dr. Lorna Breen, ( medical director of the NewYork-Presbyterian Allen Hospital ). အသက် ၄၉ နှစ် ဟာ ၂၇ ရက် နေ့က ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားပါတယ်။ သူ့အဖေ ဒေါက်တာ ဖီးလစ်ဘရင်း က သူ့သမီးဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာပြဿနာ ဘာ ရာဇဝင်တွေ မှ မရှိတဲ့ အကြောင်း၊ သူ့သမီးဟာ သူ့အလုပ်ကို သူလုပ်နေရင်း အဲဒီ အလုပ်က သူ့ကို သတ်လိုက်တာ လို့ ပြောတယ်။ လော်နာဘရင်း က ဆေးရုံရဲ့ အရေးပေါ်ကုသရေးအပိုင်းကို တာဝန်ယူနေခဲ့ရတာ ဖြစ်ပြီး သူ့ကို ကိုဗစ် ကူးစက်သွား ခံရတဲ့ အချိန်မှာ သူ့အိမ်ကို သူ မပြန်နိုင်။ အလုပ်ထဲလဲ မဝင်နိုင်- အနားယူဘို့ ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ အချိန် မှာ သတ်သေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ ကိုယ်သူ မလုပ်ကြံခင် ၂ရက်ကလဲ အရေးပေါ် 911 ဖုန်းတွေကို လက္ခံပေးရတဲ့ ၂၃ နှစ်အရွယ် လူငယ်တယောက်လဲ သတ်သေသွားပါတယ်။ စတင်းဖို့ တက္ကသိုလ် က ပါမောက္ခ ဆရာဝန် ဒီဘရာကေဆန်( Stanford University Professor Debra Kaysen, head of the International Society for Traumatic Stress Studies. ) က အခုလို ကူးစက်ရောဂါ အကြီးအကျယ် ကျရောက်နေတဲ့ အချိန် တာဝန်ယူနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေမှာ အလုပ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ စိတ်ထိခိုက်မှု ဒဏ်ရာ ( Post Traumatic Stress Disorder , PTSD) တွေ ဟာ အရမ်းစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်နေတယ်လို့ ပြောတယ်။
လော်နာဘရင်းရဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တယောက်က သူ့ခံစားချက်ကို ခုလိုပြန်ပြောတယ်။ သူတို့ဆေးရုံထဲက ထွက်လာပြီး လူတွေက သူတို့ကို လက်ခုပ်တီး ဂုဏ်ပြုကြတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ဟာ တမျိုးခံစားရတယ်။ သူတို့ သူရဲကောင်းတွေမဟုတ်ဘူး ။ သူတို့ဟာ ရှုံးနိမ့်လာကြတယ်။ သူတို့ လူနာတွေကို မကယ်တင်နိုင်ခဲ့ ဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့ကို ဂုဏ်ပြုကြတဲ့ လက်ခုပ်သံကြောင့် သူတို့ တမျိုးခံစားရတယ်။ သူငိုချင်တယ် လို့ပြောပါတယ်။
အဲဒီက ဆာရာဆိုတဲ့နပ်စ်မလေးတယောက် ရင်ဖွင့်လာ တဲ့ ဗီဒီယို ဖိုင်မှာလဲ သူတို့တတွေ ဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ PPE မလုံလောက်တော့ PPE အဟောင်းကို မလဲမလှယ် ပဲ တခြားလူနာတွေကို ကြည့်မိတဲ့ အခါတွေ ရှိတယ်။ အသက်ရှုရပ်သွားတဲ့ လူနာမျိုးကိုလဲ PPE မရှိတော့ ရောဂါကူးလာ မှာစိုးပြီး လူနာ့ ရင်ဘတ်ကို ဖိ-အသက်ပြန်ရှူအောင်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စ မျိုးတွေ မလုပ်ရဲတော့တဲ့ အခါတွေ ရှိတယ်။လူနာတွေ ကို အသက်ရှူစက်ပေါ် ပစ်ထားမိတဲ့ အခါတွေ ရှိတယ်။ အသက်ရှူစက်တွေကပေးနေတဲ့ ဖိအားကလဲ လူနာတွေရဲ့ အဆုတ်တွေကို ပျက်စီးစေတယ်လို့ သူ ထင်တယ်။ စတဲ့ အဆင်မပြေအကြပ်အတည်း ခံစားချက်ပေါင်းစုံ ရင်ဖွင့်ခဲ့ တာကိုလဲ ကြားရပါတယ်။
အမေရိကန် ဘော့စ်တွန်၊ တောင်အာဖရိက၊ နယ်သာလန် နဲ့ သြစတေးလျ မှာ ဘီစီဂျီ Bacille Calmette-Guérin vaccine (BCG ) ဆိုတဲ့ အဆုတ်တီဘီနာ ကာကွယ်ဆေးဟာ ကိုဗစ်ကို အထိုက်အလျောက် ကာကွယ်နိုင် မလား ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ စမ်းသတ်မှုတွေကို လုပ်နေကြတယ် ( Vaccine Trial )။ ၁၉၂၁ ကတည်းက စ သုံးစွဲ လာတဲ့ အဲဒီ BCG အဆုတ်နာ ကာကွယ်ဆေးဟာ အာရှ အာဖရိက နိုင်ငံ အတော်များများ အတွက် မထိုးမနေရ ထိုးရတဲ့ အဆုတ်နာ ကာကွယ်ဆေးတမျိုးပါ ။ အခု အာရှ အာဖရိက မှာ ကိုဗစ် ကူးစက်တဲ့ နှုန်း နဲ့ သေဆုံးနှုန်းနဲနေတာတွေဟာ အရင် ဘီစီဂျီ ထိုးထားခဲ့ကြဖူးရလို့ ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ဆက်စပ်ခြင်းရှိမရှိ သုတေသနပြု- သတိထားလေ့လာနေကြပါတယ်။W.H.O ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးက တော့ ဒီကိစ္စ ဟာ သေချာ သုတေသနပြုဘို့ လို မယ်။ ခုထိ BCG က ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး ကို အထောက်အကူ ပြုတယ်လို့ မပြောနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တီဘီ ဌါန အကြီးအကဲ မဒူးကား ပိုင်း( Madhukar Pai, Director of McGill University's International TB Centre ) ကလဲ ဘီစီဂျီ ကာကွယ်ဆေးက ကိုဗစ် ၁၉ ကို ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာ အကန့်အသတ်ရှိမယ်။ အိန္ဒိယကို နမူနာ ကြည့်။ သူ ဟာ ဘီစီဂျီ မထိုးမနေရ တိုင်းပြည်ထဲမှာ ပါပေမယ့် မတ်လ ၂၁ရက်နေ့က ကိုဗစ် ကူးစက်လူနာ ၁၉၅ ယောက်။ အခု ဧပြီ ၁၁ ရောက်တဲ့ အခါ ကူးစက်၈၄၄၆ အထိ အဆ ၄၀ ပွါးလာတာ ကို ကြည့်။ ဘီစီဂျီဟာ အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုတာ သိသာတယ်လို့ ထောက်ပြတယ်။
အင်္ဂလန် က ကိုဗစ်ကြောင့် အသက်ဆုံးပါးရတဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေ အတွက်အသက်အာမခံ တယောက် ပေါင် ၆၀၀၀၀ တနေ့က သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ အသက်တချောင်းကို တန်ဘိုးမဖြတ်ကောင်းပေမယ့် အစိုးရအနေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ကြည့်ရှုရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တခြား ဌါနဆိုင်ရာ တွေမှာ ကိုဗစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ရင်း အသက်ဆုံးပါးရသူတွေ အတွက် လဲ စဥ်းစားသွား ဦးမယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဗြိတိန် Care Home လူအိုရုံတွေ မှာ အခု ကိုဗစ်ကာလ စုစုပေါင်း ၃၀၉၅ သေဆုံးခဲ့ပြီလို့ စာရင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလဲ လူအိုရုံတွေက သေစာရင်းတွေကို ထပ်မံ စိစစ်မယ်လို့ ပြောတယ်။ လူအိုရုံတွေဟာ အထိခိုက်အလွယ်ဆုံး ဖြစ်ပေမယ့် ဂရုစိုက်နိုင်မှု မရှိဘူး ။ ဆေးရုံတွေမှာလို PPE ထောက်ပန့်မှုမျိုး တွေ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ တော့ တတ်နိုင်သမျှ - လက်လှမ်းမှီသမျှ ကိုဗစ်ခြေရာခံမှုတွေကိုလုပ်နေတာတွေ့ရပြီး ပေါ့စတစ် တွေ ခုထိ အကြီးအကျယ် တက်မလာတာ တိုင်းပြည်အတွက် ဝမ်းသာစရာပါ။ မကြာခင် သောင်းနဲ့ချီ ပြန်လာကြဦးမယ်ဆိုတဲ့ တိုင်းတပါးရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလဲ သေချာ လက်ခံ စိစစ်- ရပ်ရွာအလိုက် မြို့နယ်အလိုက် စောင့်ကြည့်ကြဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေ ကြားရတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လထဲ အီတလီမှာ အသည်းအသန် ကိုဗစ်ကပ် စနေချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကနေ အင်္ဂလန်ကို ပြန်လာကြတော့ လေယာဥ်ကွင်းမှာ ဘာအစစ်အဆေးမှမရှိ- ဘာ ကွာရန်းတင်းမှ မမိခဲ့ တဲ့ ဘန်စလေ, လန်ဒန်နဲ့ မန်ချက်စတာ( Barnsley , London, Manchester ) မြို့၃မြို့ က ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေသုံးယောက် ဟာ ကံကောင်းတယ်ပြောရမလား. ဗြိတိန်ကံဆိုးခြင်းအစ မတ်လက... ပြောရ မလား,,,, ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေပါတယ်။
( ၂၉-၀၄-၂၀၂၀ )
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာယီ ၃၅ Reviewed by MoeMaKa on 10:36 AM Rating: 5